The Ab Presents Nepal » उच्च अदालत पाेखराका न्यायाधीश शाही बर्खास्त !
उच्च अदालत पाेखराका न्यायाधीश शाही बर्खास्त !
काठमाडौं -: गोर्खा ब्रुअरीको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको आरोप लागेका उच्च अदालतल पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ। न्याय परिषद्‌ले न्यायीक विचनलनमा परेकाे ठहर गर्दै उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेपछि उनी कारबाहीमा परेका हुन्।
बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको परिषद्‌का एक सदस्यले बताए। परिषद्‌‌को सिफारिसपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई आज बर्खास्त गरेका हुन्।पद अनुकूलको आचरण गरेको नदेखिएको भन्दै शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो। गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै शाहीसहित अन्य २ न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानबिन टोली गठन भएको थियो। छानबिन समिति गठन भएपछि न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए। उनले छानबिन प्रतिवेदन दिएपछि न्यायाधीश शाहीलाई परिषद्‌ले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।गोर्खा ब्रुअरीकै मुद्दालाई लिएर उनीहरूविरूद्ध परिषद्‌मा अर्को एक उजुरी पनि परेको थियो।
एक जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्तसुन काण्डमा छानबिन गर्न लामो समय काठमाडौं काजमा तानिएर सफाई पाएपछि पुनः मुद्दा सुनुवाई गर्न विराटनर पुगेका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलको स्थानमा नयाँ मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ।परिषद्‌ले उक्त स्थानमा उच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको हो।